बुधबार र बिहीबार ठूला नदीमा पानीको बहाव बढ्दै ! - बुधबार र बिहीबार ठूला नदीमा पानीको बहाव बढ्दै !
बुधबार र बिहीबार ठूला नदीमा पानीको बहाव बढ्दै !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २८ जेठ, 07:26:14 AM
काठमाडौं । आगामी बुधबार र बिहीबार कोशी, बागमती र नारायणी नदीमा पानीको बहावले सतर्कता तह नाघ्ने भएकाले सचेत हुन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजको २८ नम्बर ढोका सामुन्नेबाट पाइलट च्यानल खनी नदीलाई पश्चिमतर्फ धकेलेपछि वर्षौंदेखि मर्मत अभावमा जीर्ण रहेको पश्चिमी तटबन्ध र स्परमाथि खतरा बढेको छ  । विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाले सोमबार बाढी बुलेटिन निकालेर ठूला नदीमा बाढीको जोखिम नभए पनि स–साना नदीहरुमा पानी परिरहेको बखत सचेतना अपनाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
२०७५, २८ जेठ, 07:26:14 AM